छिरेन एयरपोर्टबाट हात्ती « नेपाली मुटु
« लाईन लाग्न जानुहोस्, पैसा आउँछ
मानव अधिकार »
छिरेन एयरपोर्टबाट हात्ती
Posted by नेपाली मुटु on July 30, 2010
कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजको पाँच बर्ष अगाडी देखि झुण्डिरहेको मुद्दाको आज फैसला भएको छ । पटक–पटक फैसला हुने भनिए पनि म्याद सर्दै आएको शोभराजको मुद्दा आज पनि टुङ्गिनेमा धेरैको सन्देह थियो । तर सबैको शंका विपरित उनलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले थप १४ बर्षको जेल सजाय तोकेको हो । नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउँन सक्छु भनेर नेपाली व्यवश्थालाई ठाडो चुनौती दिएका शोभराजको विगत अनि नेपालको कानुनी क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टचारको कारण उनले सजाय पाउँन कुरा एकदमै चुनौतीपुर्ण मानिएको थियो । तर अदालतको यो कदमले कानुनको खरिद बिक्री गर्नेहरुलाई गतिलो झापड दिएको छ । ३ दशकअघि उनको हातबाट मारिएकी अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोनचिजको आत्मालाई बल्ल आफ्ना दोषीले सजाय पाएको देखेर शान्ति महसूस भयो होला ।
न्यायधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई हत्याको दोषी भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने पुनरावेदन अदालतकै फैसलालाई सदर गर्ने अन्तिम निर्णय आज गरेको हो । नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भनेको २० वर्षको जेल सजाय हो । उनले ६ वर्ष जेलमा बिताइसकेका हुनाले अब बाँकी १४ वर्ष जेलमा बिताउनु पर्ने हुन्छ ।
चाल्र्स शोभराजले नेपाल बस्दा गतिला शान मात्र लगाएनन् । आफ्नी छोरी उमेरकी युवती निकिता विश्वाससँग पनि प्रेम प्रसङ्ग चलाए । तिनै निकितासँग जेलमा नै उनको प्रेम बिबाह पनि भयो । फ्रान्स गएर फ्रान्सकै कानुन अनुसार बिबाह गर्ने भन्ने निकिताको गफ पनि नसुनिएको होइन । ति निकिता, शोभराजकी वकिल शकुन्तला थापाकी छोरी हुन् । अब जेलबाट शोभराज छुटुञ्जेल निकिता ३५ बर्षकी हुने छिन् भने शोभराज ८० बर्षका हुनेछन् । अब यी दुईको प्रेम षड्यन्त्र मात्र थियो कि वास्तविक थियो, अबका १४ बर्षले यो बताउँने छ ।
यो फैसलासँगै थोरै भए पनि जनमानसमा अदालत र कानुन प्रतिको विश्वास बढ्ने छ । अदालत भित्र सबै भन्दा बढि भ्रष्टचार हुने कुरालाई पनि यो फैसलाले हटाउँन मद्दत पुग्नेछ । तर निकिताको कुरा भने बेग्लै छ । उनी अदालतले भ्रष्टाचार गरेर उल्टो फैसला गरेको भन्दै यसका विरुद्धमा अख्तियार र अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने गफ हाक्दै थिइन् । भ्रष्टचार नै भएको भए त्यती धनी शोभराजले पैसा खुवाउँन नसकेर थुनिएका भन्ने कुरा कसले पत्याउला ? फेरि तिनी अख्तियार त जालिन्, तर अन्तराष्ट्रिय अदालत जान मिल्छ र भन्या ? आफ्ना पति थुनिएको खवरले बेहोस भएर यस्तो फलाकेकी होलीन् । होसमा आए पछि सायद सबै ठिक हुन्छ ।
भारतीय पिता र अविवाहित भियतनामी आमाको कोखबाट सन् १९४४ को अप्रिल ६ तारिखमा गुरुमुख शोभराजका रुपमा उनको जन्म भएको हो। जन्मेको केही समयपछि नै भारतीय पिताले आमालाई छाडे। आमाकी नयाँ ब्वाइफ्रेन्डले झड्केलो बाबुका रुपमा शोभराजलाई हुर्काए। उनी फ्रान्सेली नागरिक थिए। झड्केलो बाबु र आफ्नै आमाका अरु सन्तानको तुलनामा उनलाई कम महत्त्व दिइएकोले हो कि किशोर उमेर मै उनमा समस्या आइपर्‍यो।
जेल उनको पुरानो घर हो। उनी पहिलो पल्ट सन् १९६३ मा चोरीको आरोपमा जेल परेका थिए। चोरी र डकैती गर्दै आएका शोभराजले पहिलो हत्या सन् १९७५ मा गरेको पत्ता लागेको छ। उनको पहिलो शिकार सियाटलकी Teresa Knowlton थिइन्। उनले आफ्ना धेरै शिकारलाई हत्या गरेर जलाइदिन्थे। डच विद्यार्थीहरु Henk Bintanja र उनकी प्रेमिका Cornelia Hemker लाई थाइल्यान्डमा हत्या गरेर उनीहरु कै पासपोर्ट लिएर नेपाल पसेका थिए शोभराज र उनका सहयोगी Leclerc सन् १९७५ मा। नेपाल आएर उनले क्यानाडेली नागरिक Laurent Ormond Carrière र क्यालिफोर्नियाकी Connie Bronzich को हत्या गरेर लाश चिन्न गाह्रो हुने गरी हत्या गरे। अनि उनीहरु कै पासपोर्ट प्रयोग गरेर नेपालबाट उडे।
भारत लगायत अरु थुप्रै देशमा अरु थुप्रैको पनि उनले हत्या गरे। तर भारतमा उनलाई मृत्युदण्डको सट्टा १२ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। भारतको जेलमा गार्डहरुलाई घुस खुवाएर जेलभित्रै टिभी, मीठो खाना, आरामदायी बाससहित विलासी जेल जीवन उनले बिताए। जेलै उनका लागि ठीक पनि थियो। किनभने थाइल्यान्डमा उनले गरेको हत्याको लागि त्यहाँको सरकारले २० वर्षका लागि अरेस्ट वारेन्ट जारी गरेको थियो। उनी भारतबाट रिहा भएको भए निश्चित रुपमा थाइल्यान्डलाई सुपुर्दगी गरिन्थ्यो र त्यहाँ उनले मृत्युदण्ड पाउँथे। चलाख शोभराजले रिहा हुन २ वर्ष बाँकी छँदा मार्च १९८६ मा कैदी र गार्डहरुका लागि पार्टी दिएर स्लिपिङ पिल खुवाएर जेलबाट टाप ठोके। तर उनलाई तुरुन्तै गोवामा गिरफ्तार गरियो र उनलाई थप १० वर्ष जेल सजाय सुनाइयो।
सन् १९९७ को फेब्रुअरी १७ मा ५२ वर्षको उमेरमा उनी भारतीय जेलबाट रिहा हुँदा उनीविरुद्धका धेरै वारेन्ट, प्रमाण र प्रत्यक्षदर्शी हराइसकेका थिए। सुपुर्दगी गर्ने कुनै देश नरहेकोले भारतीय अधिकारीहरुले उनलाई फ्रान्स फर्कन दिएका थिए।
शोभराजको थप जानकारी
फ्रान्स फर्केपछि उनी विलासी जीवन बिताइरहेका थिए। उनले आफ्नो अन्तर्वार्ता, कथाका लागि मोटो रकम असुल्थे। तर पाप धुरीबाट कराउन बाँकी थियो। त्यसैले उनी नेपाल आएछन्। सन् २००३ को सेप्टेम्बर १७ मा दि हिमालयन टाइम्सका पत्रकारले शोभराजलाई काठमाडौँको सडकमा भेट्टाए। पत्रिकाले यो स्कूप समाचार छापेको दुई दिनपछि प्रहरीले उनलाई दरबारमार्गको याक एन्ड यति होटलको क्यासिनोबाट उनलाई गिरफ्तार गरेको थियो।
उनलाई अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोनचिजलाई मारेको अभियोगमा २०३२ सालमा दायर भएको मुद्दामाथि २८ वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। फैसलाको विरोधमा शोभराज पुनरावेदन अदालत गए। पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यही फैसलालाई सदर गर्‍यो। त्यसपछि यो निर्णयविरुद्ध शोभराजले २०६२ कात्तिक २४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले आजै पुनरावेदनको सोही फैसलालाई सदर गरेको हो।
नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेको अभियोगमा भने पुनरावेदनले सुरुमा शोभराजलाई सफाइ दिएको थियो। तर पछि सरकारले पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध पाटनको उक्त निर्णयविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले पुनः पुनरावदेन अदालत पाटनमा फर्काएको थियो। करिब १ वर्षअघि पुनरावेदनले सो मुद्दामा पनि शोभराजलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध फेरि शोभराजले ०६६ साउन ८ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। यो मुद्दामा पनि पुनरावेदन कै फैसलालाई आज सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
चार्ल्स शोभराजविरुद्ध अर्को कर्तव्य ज्यान (हत्या) सम्बन्धी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। भक्तपुरको साँगामा क्यानाडियन नागरिक लरेन्ट अरमान्ड क्यारियलको हत्याको अभियोगमा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। अब यो हत्यामा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइने भएको छ।
This entry was posted on July 30, 2010 at 10:35 pm	and is filed under समाचार विश्लेषण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “छिरेन एयरपोर्टबाट हात्ती”
खुच्चिङ ठिक्क प¥यो ।
Jina B.K. said
नेपालको प्रहरी र अदालतमा अझै पनि इमान्दारिता बाँकी रहेछ । यस्तै अपराधीका लागि मृत्युदण्डको व्यावश्था गर्नु पर्ने हो । निकितालाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पठाउँनु पर्ने अनि सात पटक फाँसी दिन्छन् अनि थाहा पाउँछिन् निकिताले ।